» कांग्रेसमा देउवाविरुद्ध पौडेल समूह एक ढिक्का
कांग्रेसमा देउवाविरुद्ध पौडेल समूह एक ढिक्का
‘महाधिवेशनमा हामी सभापतिमा एउटै उम्मेदवार दिन्छौं, देशभरिका साथीहरूलाई म ढुक्क रहन आग्रह गर्छु, व्यक्तिका विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं,’ पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले भने । ‘कसको नाममा सहमति हुन्छ त रु’ भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा भने पौडेलले व्यक्तिका विषयमा पछि टुंगो लगाइने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी रहेका नेताहरू महामन्त्री डा। शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, नेत्री सुजाता कोइराला र गगन थापा सहभागी थिए ।
नेता गगन थापाले भने केही दिनअघि मात्रै आफू महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनी यसअघि भने पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट १३ औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसबखत भने उनी डा. शशांक कोइरालासँग पराजित भएका थिए ।
यसपटक भने उनले कुन समूहबाट आफू उम्मेदवार बन्ने मुख खोलेका छैनन् । तर, पौडेल समूहको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका कारण उनी सोही समूहमा खुल्ने आँकलन गरिएको छ ।
वडा अधिवेशन सुरु हुनु अघिल्लो दिन कांग्रेसभित्रको पौडेल समूहले देशभरका नेता कार्यकर्ताहरूलाई उत्साह जगाउन पत्रकार सम्मेलनमार्फत समूहभित्र एकता रहेको सन्देश दिएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।